जनताको जीवन रक्षा बिर्सेर प्रधानमन्त्री नाटक मञ्चनमा लाग्नु भएको छ : बालकृष्ण खाँण [अन्तर्वार्ता] « AayoMail
जनताको जीवन रक्षा बिर्सेर प्रधानमन्त्री नाटक मञ्चनमा लाग्नु भएको छ : बालकृष्ण खाँण [अन्तर्वार्ता]
तीव्र गतिमा फैलिइरहेको कोरोनाको दोस्रो लहरमा दैनिक हजारौं व्यक्ति संक्रमित भइरहेका छन्। उपचार अभावमा दर्जनौंले ज्यान गुमाइरहेका छन्। मुलुकका कतिपय जिल्ला, नगर, सहरमा निषेधाज्ञा जारी भएको अवस्था छ।
तर, सरकार जनताको जीवन रक्षाभन्दा राजनीतिमा बढी रुमल्लिएको छ। आइतबारको लुम्बिनी प्रकरण यसैको श्रृंखला हो। प्रधानमन्त्रीले महामारीकै बीच वैशाख २७ गते विश्वास मत लिने भनेका छन्। कोरोना महामारीमा सरकारको भूमिका र पछिल्लो समय सिर्जित राजनीतक घटनाक्रमबारे प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणसँग गरिएको कुराकानीः
आइतबार दिनभर लुम्बिनी प्रदेशमा भएको राजनीतिक घटनाहरूलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
मुख्यमन्त्रीले अविश्वास प्रस्तावको प्रक्रियागत ढंगले सामना गर्नुपर्थ्याे। मुख्यमन्त्रीविरुद्ध आएको अविश्वास प्रस्तावको उहाँले सामना गर्नुपर्ने थियो। तर, नाटकीय रूपमा राजीनामा दिनुभयो। र, बहुमत नहुँदा नहुँदै प्रदेश प्रमुखले उहाँलाई पुनः मुख्यमन्त्रीको सपथ दिलाउनु भयो।
जबकि अहिले प्रदेशसभाको ८० मध्ये उहाँसँग ३८ मात्रै छन्। बहुमत गुमिसकेको व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्रीमा सपथ खुवाउनु विल्कुलै असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र हास्यास्पद हो।
यसबाट राजनीतिले आफ्नो मूल सिद्धान्तबाट बाटो विराएको जस्तो लागेको छ कि छैन?
सबभन्दा मूल समस्या नेकपा एमाले र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले संविधानविपरीतकै काम गरिरहनु भएको छ। उहाँ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकै दिनबाट संविधानविपरीतकै क्रियाकलापहरू गर्नु भएको छ। संविधानलाई कमजोर पार्ने काममा उहाँ निरन्तर लागिरहनु भएको छ। र, आम नागरिकलाई के लागेको छ भने ओलीजी यो संविधानलाई समाप्त गर्न चाहनुहुन्छ। जनताको धेरै ठूलो बलिदान र संघर्षबाट संविधानसभामार्फत् यो संविधान निर्माण भएको हो। संविधानमा कतिपय राम्रा कुराहरू पनि छन्। कतिपय कमिकमजोरी पनि होलान्। तिनलाई सुधार्दै लान सकिन्छ।
मुलुकमा जुन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ त्यसलाई कसरी सफल बनाउने, संविधानलाई कसरी सफल बनाउने त्यसतर्फ सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने थियो। तर, संविधानै समाप्त पार्नेमा सरकारै तल्लिन छ।
अर्कोतिर आमनागरिकको जीवन रक्षा गर्नु, कुनै पनि नागरिकको अकालमा मृत्यु हुन नदिनु सरकारको पहिलो जिम्मेवारी हो। तर अहिले चाहे संघीय सरकार होस् वा प्रदेश सरकार, नागरिकको जीवन रक्षामा गम्भीर देखिएनन्।
कोरोना भाइरसको पहिलो महामारीमा पनि ‘लकडाउन’ गरेर सरकार आफ्नो दायित्वबाट पन्छियो। यति गम्भीर महामारीमा औषधि खरिद गर्दा पनि भ्रष्टाचार गरेको जगजाहेर छ।
अहिले प्रधानमन्त्रीजी डिपिआर नगरेका, बजेट नछुट्याइएका योजनाहरूको शिलान्यास गर्ने, पूर्ण नभएका आयोजनाहरूकै उद्घाटन गर्नैमा तल्लिन हुनुहुन्छ। एकातिर सरकारले २५ जनाभन्दा मानिसहरु भेला नहुने प्रोटोकल बनाउँछ अर्कोतिर त्यो प्रोटोकललाई सरकारकै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले पालना गर्नु हुन्न।
हरेक मन्त्रालयका मन्त्रीहरू नै गैरउत्तरदायी भएको कारणले पनि दोस्रो चरणको महामारी झन तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ भने अस्पतालहरूमा संक्रमितले बेड र अक्सिजन नपाएर जीवन गुमाउनु परिरहेको छ। यसको तयारी अगाडिदेखि नै गर्नुपर्ने थियो। विज्ञहरूले भन्दै आएका थिए–दोस्रो चरणको महामारीले झन् भयावह स्थिति आउँछ र सरकार बेलैमा सचेत भएर पूर्वतयारी गर्नुपर्छ। सरकारले कुनै तयारी पनि गरेन। त्यसैले संविधान रक्षाका लागि पनि यो सरकार गम्भीर छैन र नागरिकको जीवन रक्षाका लागि पनि संवेदनशील र उत्तरदायी छैन।
कोरोना महामारीका कारण सारा मुलुक सन्त्रास र कष्टमा रहेको बेला प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन्छु भन्नु भएको छ। पुस ५ यता चुप लागेर बसेका प्रधानमन्त्रीले महामारीमै विश्वासको मत किन लिनु पर्‍यो?
प्रधानमन्त्रीजीले विभिन्न नाटकको मञ्चन गर्नुहुन्छ। अनि जनतालाई गुमराह गर्न उहाँ सिद्धहस्त हुनुहुन्छ। अहिले खास गरेर जनताको जीवन रक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने हो। तर, उहाँ त्यसमा असफल र असक्षम भइसक्नु भएको छ। दिनानुदिन हजारौंको संख्यामा संक्रमित भइरहेको र ठूलो संख्यामा मान्छेको जीवन गुमिरहेको छ। यो कुरालाई अन्यत्र ध्यान मोड्नका लागि उहाँले फेरि राजनीति कर्मको सुरूवात गर्नुभएको छ। उचित बेलामा उचित जिम्मेवारी होइन यो।
लुम्बिनीको पछिल्लो प्रकरण पनि यसैको श्रृंखला त होइन?
अब नेकपा एमाले सत्तामा पुगिसकेपछि उ सत्तामा टाँसिरहन्छ। पहिले त अविश्वास प्रक्रियालाई उहाँले अगाडि बढाउनुपथ्र्यो। अविश्वास प्रस्ताव पास नभएको भए उहाँ रहनुहुन्थ्यो। पास भइदिँदा जानु हुन्थ्यो। अविश्वास प्रस्तावको प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्न उहाँले नाटकीय रूपमा राजीनामा दिनुभयो। र, फेरि मध्यरातमा उहाँ आफैंले सपथ खानुभयो।
प्रदेश प्रमुख पनि वास्तवमै गौरवशाली र संवैधानिक प्रदेश प्रमुखभन्दा पनि एमालेको एकदम अदना निरीह कार्यकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। सायद दुनियाँको इतिहासमा कुनै पनि राष्ट्रप्रमुख वा प्रदेश प्रमुखले सपथ खाने पदाधिकारीको निवासमा गएर सपथ खुवाएको यो पहिलो घटना हो।
प्रदेश प्रमुखकै कार्यालयमा उहाँले सपथ खुवाउन नसकेर मुख्यमन्त्रीकै निवासमा गएर मध्यरातमा सपथ खुवाउनु हुन्छ। दुनियाँमा कहीँ पनि यस्तो घटना भएको छैन होला।
वैशाख २७ गते प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने भन्नु भएको छ। त्यसमा कांग्रेसको स्ट्याण्ड के हुन्छ?
कांग्रेसको यो सरकारलाई समर्थन रहँदैन। यो सरकारको विरुद्धमै हामी मत राख्छौं। केन्द्रीय समिति बैठकले नै प्रतिनिधिसभा भंग गरेर असंवैधानिक कदम चालेका प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने निर्णय गरिसकेको छ। यो सरकारलाई समर्थन गर्ने कुरा नै हुँदैन। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतलिँदा कांग्रेसले विपक्षमा जान्छ।
कोरोनाकालमा सरकारको ‘परफर्मेन्स’ लाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कसरी मूल्यांकन गरेको छ?
‘परफर्मेन्स’ को हिसाबले सरकारलाई नम्बर दिनुपर्‍यो भने हामी शून्यमात्रै दिन्छौं। महामारीका बेला नागरिकको जीवन रक्षाका लागि सरकार संवेदनशील भएको छैन। पहिलो चरणमा पनि नेपाल र नेपाली जनताले धेरै ठूलो नोक्सानी ब्यहोर्नु पर्‍यो। र,त्यो क्रममा मजदूर, शिक्षक, कर्मचारी, प्राध्यापक, किसान कसैलाई पनि सरकारले सम्बोधन गरेन।
अब यो महामारीको बेलामा श्रमिक र मजदूरले रोजगारी गुमाउनुका साथै पेट भर्न पनि ठूलो समस्या भयो। किसानले मलबिउ नपाउने र उत्पादनले बजार पनि नपाउने त्यस्तो अवस्था सरकारले बनायो। उद्योगी र व्यवसायीहरूको व्यवसाय पनि ठप्प भयो। तर, सरकारले भने कर तिर्ने उर्दी निरन्तर जारी गरिरह्यो। कुनैपनि वर्ग र क्षेत्र सरकारको निर्णयबाट सन्तुष्ट हुन सकिरहेका छैनन्। सबै वर्ग उत्पीडित छन्।
त्यसपछि विकासको क्रममा चालू खर्च बढेको छ। पूँजीगत र विकास खर्च घटेको छ। एकातिर प्रधानमन्त्रीले धरहराको उद्घाटन गर्नुभयो तर त्यसको ४० प्रतिशत काम अझै बाँकी छ भनेर निर्माणकर्ताले भनिसकेका छन्। ४० प्रतिशत काम पूरा गर्न झन्डै एक वर्ष लाग्छ निर्माणकर्ता भन्छन्। आयोजना पूरै भएको छैन तर उद्घाटन भइसक्यो।
दिनानुदिन थुप्रै उद्घाटन र शिलान्यास गरिरहनु हुन्छ उहाँ। शिलालेखमा आफ्नो नाम लेखाउन प्रधानमन्त्रीले कामै पूरा नभएका आयोजनाहरूको उद्घाटन गर्न व्यस्त हुनुहुन्छ।
कोरोना महामारी नफैलिओस् भनेर सरकारले प्रोटोकल निकाल्छ। प्रधानमन्त्रीलाई थाहा हुन्छ कि हुँदैन। आफैं गएर भीडभाड जम्मा गर्नुहुन्छ।
यतिबेला बजेट अधिवेशन बोलाउनुपर्नेमा सरकारले विश्वासको मतमात्रै लिन भनेर संसदको अधिवेशन बोलाएको छ। कसरी हेर्नुभएको छ?
अहिले बजेट अधिवेशन बोलाउनुपर्नेमा उहाँ विश्वासको मत लिन्छु भनेर भनिरहनु भएको छ। अरू केही होइन प्रधानमन्त्रीजी वास्तविक मुद्दालाई किनारा लगाएर जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्न खोज्नु भएको छ।
अहिले त महामारी नियन्त्रण र जनताका जीवन रक्षाका लागि सरकारको सबै शक्ति केन्द्रित हुनुपर्ने हाेइन र? अहिले त कामचलाउ प्रधानमन्त्री ओलीजी नै हुनुहुन्छ। तत्कालै उहाँलाई निकाल्ने काम त भएको छैन।
अहिले त गर्नुपर्ने अक्सिजनको व्यवस्थापन, चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहित गर्ने पो हो। आवश्यक परेको ठाउँमा बेड थप्ने, बिरामीको उपचारका लागि सुविधान थप्ने काम गर्नुपर्ने होइन र? आइसियू, भेन्टिलेटर र भ्याक्सिनको व्यवस्था गर्नतर्फ सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने थियो।
यो सब गर्नुपर्ने ठाउँमा नसकेपछि उहाँ त्यताबाट ध्यान मोड्न विश्वासको मत लिने नाटक मञ्चन गर्नुभएको छ।
यतिबेला नीति तथा कार्यक्रममा छलफल गरेर बजेटको तयारी गर्नुपर्ने होइन र?
प्रधानमन्त्रीजी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने मुडमै हुनुहुन्न। उहाँ अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याउन खोजिरहनु भएको छ।
विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके प्रधानमन्त्रीले फेरि संसद विघटन गर्ने आँकलन भइरहेको छ। कांग्रेसले कसरी हेरेको छ?
विश्वासको मत लिनसक्नु भएन भने उहाँले राजीनामा गर्नुपर्छ। अनि संविधानको व्यवस्थाअनुसार वैकल्पिक सरकार निर्माणको प्रक्रिया आरम्भ गर्नुपर्ने हुन्छ।